Sunday February 24, 2019 - 20:24:59 in Wararka by Liibaan Jeexoow
AFRICOM ayaa 2-dii qof ee ku dhintay duqeyntii Kuunya Barroow ku tilmaamtay Argagaxiso!
Taliska AFRICOM wuxuu sheegay in Afar weerar oo xagga cirka ah uu ka geystay degmooyinka Awdheegle, Janaale iyo deegaanka Kuunya Barroow islamarkaana uu ku dilay 2 dagaalyahan oo katirsan Xarakada Shabaabul Mujaahidiin!.
Waa xaqiiq in khasaaraha ka dhashay duqeymihii xalay ay ahaayeen 2 qof sida Mareykanku sheegay waana labada qof ee mid cannugga yar ee 20-tan maalmood jirka ah yahay iyo macallinka dugsi Qur'aan balse Mareykanku wuxuu dadkaas ku tilmaamay askar Al Shabaab ah!.
Mareykanku wuxuu iska indha tiray in duqeymihii xalay uu ku xasuuqa dad shacabka isagoo aan waxba kasoo qaadin sawirradii lagasoo qaaday goobaha laduqeeyay ee muujinayay shacabka dhimashada iyo dhaawac noqday.
Duqeymihii xalay wuxuu kusoo koobay Afar weerar oo kaliya waana war aan sal iyo raad laheyn, deegaanka Kuunya Barroow duqeymuhu waxay billaawdeen xalay maqribkii balse kuwa khasaaraha dhaliyay ayaa dhacay xalay saqdii dhexe waxaana geysanayay diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee Drone-ka loo yaqaan iyo kuwa qumaatiga ukaca.
Waxaa isweydiin mudan sida Mareykanka uu Argagaxiso ugu tiimbareeyay ilmaha wali dherebta ku jira ee 20 maalmood jirka ah iyo Macallinka dugsi Qur'aanka caanka ah deegaanka Kuunya Barroow.
Falkan ayaa shacabka Soomaaliyeed banaanka usoo dhigaya cadaawadda ay dowladda Mareykanka uqabto muslimiinta, waxaa been aan sal iyo raad laheyn ah qiyamka ay sheegato xukuumadda Mareykanka ee ah in ay uturto dadka rayidka ah wajiga Madoow ee Mareykanka ayaa banaanka usoo baxay wixii ka dambeeyay sanaddii 2001 xilligaas oo ciidanka American-ka ay duullaan gardarra ah ku qaadeen Ciraaq iyo Afghanistan dad shacab ahna ku laayeen.
Hoos ka Daawo Sawirrada Argagaxisadii Mareykanku ku dilay deegaanka Kuunya Barroow!